समाज – Samabeshi Khabar
Friday, March 5Nepal News Portal
२१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०९:०४२१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०९:०४२१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०९:०४ by Samabeshi KhabarNo Comments
मुस्कान खातुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कार
प्रमुख समाचार, ब्यानर, समाज
काठमाडौं, (ससं) । मुस्कान खातुनले अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला (आइडब्ल्युओसी) पुरस्कार पाउने भएकी छिन् । नेपालका लागि अमेरिकी दूतावास र्‍यान्डी बेरीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत उक्त जानकरी दिएका हुन् । अमेरिकी प्रथम महिला जिल बाइडन र विदेश मन्त्री टोनी ब्लिङ्कनले ८ मार्चमा एक भर्चुअल कार्यक्रमको आयोजना गरी पुरस्कार प्रदान गर्ने दूतावासले जनाएको छ। आइडब्ल्युओसीले पुरस्कार व्यक्तिगत जोखिम र त्यागमा शान्ति, न्याय, मानव अधिकार, लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणको वकालत तथा नेतृत्व गर्ने महिलाको सम्मान गर्ने बताइएको छ। यसअघि उक्त पुरस्कार पाकिस्तानमा महिला तथा किशोरीका लागि वकालत गर्ने मलाला युसुफजईले पाएकी थिइन् । सन् २०१९ मा मुस्कान तेजाब हमलाको सिकार भएकी थिइन्। उनको अनुहार, छाती र हातमा गहिरो चोट लागेको थियो। पीडाकै बीच पनि मुस्कानले आफूलाई परेको घटनालाई नेपालमा परिवर्तन ल्याउने एक ...
२१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०७:१४२१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०७:१४२१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०७:१४ by Samabeshi KhabarNo Comments
आज फागुन २१ गते शुक्रबारको तपाईंको राशिफल
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) अनावश्यक ठाउँमा धन खर्च होला । आफ्नो विचार विपरित निर्णय हुनेछ । कामहरु अधुरै रहलान् । वैदेशिक क्षेत्र कमजोर रहला । बसाइको स्थानान्तरण अथवा यात्रा हुने सम्भावना छ। व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। वृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) लगानीको वातावरण बन्नेछ । मुद्धा मामिलामा सफलता पाईनेछ । न्यायिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । शुभकार्यको चर्चा पनि चल्नेछ । घरमा अतिथीको आगमन हुनेछ । महत्त्वपूर्ण कामको थालनी हुनेछ । आँटेको काम पनि पुरा होला । मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै फाइदा हुने काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ। प्रयत्न गर्दा आफ्नो वर्ग वा क्षेत्रको नेतृत्व हातलागी हुनेछ। मेहनत परे पनि भाग्यले राम्रै अवसर दिलाउनेछ। समाजमा तारिफयोग्य काम गर्दै लोकप्रियता हासिल गर्न सकिनेछ । कर्...
२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार १३:४५२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार १३:४५२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार १३:४५ by Samabeshi KhabarNo Comments
महालक्ष्मी विकास बैंकले २७० बालबालिकलाई विद्यालयको पोशाक वितरण
काठमाडौं, (ससं) । महालक्ष्मी विकास बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न शाखाहरूबाट विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेको छ । सोही कार्यलाई निरन्तरता दिँदै बैंकको भैरहवा शाखाले सिद्धार्थनगर न. पा.–४, दोगहरामा अवस्थित श्री दुर्गा माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत २७० जना बालबालिकालाई विद्यालय पोशाक वितरण गरेको छ । सिद्धार्थनगर न.पा.४ का अध्यक्ष मुक्ति यादव र बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्य राहुल अग्रवालले अभिभावकलाई पोशाक वितरण गरेको उक्त कार्यक्रममा विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक विद्यार्थी संघका पदाधिकारी, सम्पूर्ण शिक्षक, महालक्ष्मी बिकास बैंकका शाखा प्रबन्धक र कर्मचारी तथा विद्यालयका संरक्षकहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।...
२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार १३:१८२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार १३:१८२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार १३:१८ by Samabeshi KhabarNo Comments
महोत्तरीको जङ्गलमा एकै साथ पाँच दर्जन नीलगाई भेटिए
प्रमुख समाचार, समाज
महोत्तरी, (ससं) । महोत्तरीको मनराशिस्वा नगरपालिकामा एकै साथ पाँच दर्जन बढी निलगाई फेला परेका छन् । सो नगरपालिकाको वन क्षेत्रमा केही दिनदेखि एक्कासि लोपोन्मुख वन्यजन्तु निलगाई देखा पर्न थालेको स्थानीय बासिन्दाले जानकारी दिएका हुन् । विभिन्न उमेर समूहका पाँच दर्जनभन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेको निलगाई नगरपालिकाको वन क्षेत्र आसपासका खेतीबारीमा लगाइएको दलहन, तेलहन र तरकारीबालीमा हुलका हुल प्रवेश गरेर सबै बालीनाली खाइदिने गरेको स्रोतको भनाई छ । दर्जनौँको सङ्ख्यामा रहेको नीलगाई र त्यसको बाछो वन क्षेत्रको खर र झारीमा लुकेर बस्ने गरेको तथा मानिसलाई आफूतिर आएको देखेर तीव्र गतिमा भाग्ने गरेका छन् । स्थानीयवासीले वन क्षेत्रमा निलगाई फेला परेको बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत जानकारी गराइसकेका छन् । गर्मीयामको आगमन भएसँगै अहिले जिल्लाको उत्तरवर्ती माथिल्लो वन क्षेत्रमा विभिन्न स्थानमा डढेलो लागे...
२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार ०८:०४२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार ०८:०४२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार ०८:०४ by Samabeshi KhabarNo Comments
प्रमुख समाचार, समाज, स्वास्थ्य
काठमाडौं, (ससं) । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले फागुन २३ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने कोभिड–१९ विरुद्धको खोप दोस्रो चरणको अभियान २० दिन सञ्चालन गर्ने भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले पहिलो १० दिनमा ६५ वर्षमाथिका र त्यसपछिका १० दिन ५५ वर्षदेखि ६४ वर्ष उमेर समूहलाई खोप दिइने जानकारी दिए । आफूलाई पायक पर्ने स्थानबाट खोप लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले भारत सरकारको अनुदानमा प्राप्त १० लाख मात्रा ‘कोभिशिल्ड’ पहिलो चरणको अभियानअन्तर्गत गत माघ १४ गतेदेखि सञ्चालन गरेर सम्पन्न भएको थियो । सो अवसरमा खोप नेपालको कूल जनसङ्ख्याको १।४ प्रतिशतलाई खोप प्रदान गरिएको थियो । सोमा अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार र सरकारी कर्मचारीलगायत चार लाख २९ हजार ७०५ जनालाई खोप लगाएका थिए । दोस्रो चरणको खोप पनि ‘कोभिशिल्ड’ नै प्रदान गरिने छ ।...
२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार ०७:४१२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार ०७:४१२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार ०७:४१ by Samabeshi KhabarNo Comments
यार्सागुम्बाको औषधीय महत्व जान्नुहोस्
काठमाडौं, (ससं) । यार्सा गुम्बा नेपालमा पईने महंगो तथा शक्किवर्द्धक जडिबुटी हो । यो हिमाली भेगमा पाइने जडिबुटी हो । यसले औषधिको समेत काम गर्छ । हिमाली भेगमा पाइने यो जडिबुटी महंगो भएकै कारण यो टिप्ने सिजनमा स्थानीयहरूको तछाडमछाड हुने गरेको छ । यसका फाइदाहरु यस्ता छन् : — यसले अत्यन्तै शक्तिबर्द्धक र यौन क्षमता बढाउने काम गर्छ । — यो वनस्पती मानव जीवनको लाग सञ्जिवनी बुटी नै सावित गरेको छ । — बिहान–बेलुका महसँग मिलाएर दुधसँग एक ओटा यार्सागुम्बा खानाले यसले हेपाटाइटिस बी भारइसलाई समेत नष्ट गरिदिन्छ । — शरीरलाई तन्दुरुस्त र युवापन बनाउँछ । —यसले अत्याधिक यौन शक्ति पैदा गर्ने काम गर्छ । —यसले फोक्सो र मृगौलाको क्यान्सरलाई नियन्त्रणसम्म गर्ने काम गर्छ । — शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरुलाई सबल र सक्षम बनाउँछ । ...
२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार ०७:१५२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार ०७:१५२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार ०७:१५ by Samabeshi KhabarNo Comments
आज फागुन २० गते बिहीबारको तपाईंको भाग्य, राशिफलमा हेर्नुहोस्
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) टाढाका साथीभाइसँग सम्पर्क बढ्नेछ। बसाइको स्थानान्तरण अथवा यात्रा हुने सम्भावना छ। व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। साँझतिर अधुरो काम बन्नेछ र रमाइलो भेटघाट पनि हुनेछ। काम पूरा नभए पनि सम्मानित स्थान प्राप्त गर्न सकिनेछ। वृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) रोकिएको धन पाइनसक्छ । घरमा अतिथीको आगमन हुनेछ । महत्त्वपूर्ण कामको थालनी हुनेछ । आँटेको काम पनि पुरा होला । परिवारजनको सहयोगले काम बनाउन सकिनेछ। टाढिएका आफन्त नजिकिनेछन्। मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) प्रतीक्षित नतिजा कमजोर देखिनाले केही काम दोहोर्याउनुपर्ला । अवसर र व्यवधानका बीचबाट कर्मयोग अघि बढ्नेछ। लगनशीलताले परिस्थिति सहज बनाउन सकिनेछ। साहसी काम गरेर अरूको मन जित्न सकिनेछ। लगनशीलताले विभिन्न अवसर दिलाउनेछ। कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) परिश्र...
१९ फाल्गुन २०७७, बुधबार १७:४९१९ फाल्गुन २०७७, बुधबार १७:४९१९ फाल्गुन २०७७, बुधबार १७:४९ by Samabeshi KhabarNo Comments
सल्यानमा आज जिप दुर्घटना, चालक सहित तीनजना घाइते
मनोज डाँगी काठमाडौं, (ससं) । सल्यानमा आज (बुधबार) जिप दुर्घटना भएको छ । जिप दुर्घटनामा परी चालक सहित तीनजना घाइते भएका छन् । श्रीनगरबाट सिमेन्टे बोकी वनगाढ कुपिण्डे नगरपालिका-१२ स्थित निगालचुलातिर जाँदै गरेको रा१च ४४८ नम्बरको जिप सोही ठाउँको बस्नेत टोल नजिकै दुर्घटना भएको हो ।दुर्घटनामा चालक त्रिवेणी गाउँपालिका-४ का २१ वर्षीय मुकुण्द बुढाथोकी, जिपमा सवार वनगाढ कुपिण्डे नगरपालिका-१२ निगालचुलाका २० वर्षीय जयबहादुर घर्ती र सोही ठाउँका १८ वर्षीय नेत्रलाल घर्ती घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जानकारी दिएको छ । घाइतेहरुको अवस्था सामान्य भएको र जिल्ला अस्पताल सल्यानमा उपचार भइरहेको प्रहरीको भनाई छ । जिप सडकभन्दा करिब एक सय मिटर तल खसेको थियो ।...
१९ फाल्गुन २०७७, बुधबार १३:५३१९ फाल्गुन २०७७, बुधबार १३:५३१९ फाल्गुन २०७७, बुधबार १३:५३ by Samabeshi KhabarNo Comments
राम्री युवतीसँग विवाह गर्नुका अचम्मका बेफाइदा, के हुन् तँ ? हेर्नुहोस्
रोचक, समाचार, समाज
काठमाडौं, (ससं) । धेरै पुरुषहरु सुन्दर युवतीसँग नै विवाह गर्न चाहन्छन् । चिटिक्क मिलेको अनुहार, सलक्क परेको शरिर गोरो वर्णकी युवतीमाथि धेरैको नजर जान्छ । घर परिवारले पनि राम्री युवतीसँग नै विवाह गराउन चाहन्छन् । बाहिर हेर्दा सुन्दर देखिएकी युवतीमा सर्वगुण सम्पन्न हुनु आवश्यक ठान्दैनन । उनीहरुको स्वभाव, आनीबानी र गुण अवगुणको बारेमा त झन् सोच्दैनन त्यसैले पछि पछुताउनु पर्छ । युवतीको सुन्दरता मात्र देखेर विवाह गर्नु मुर्खता हो । राम्रा युवतीको मनमा खोट हुनसक्छ, सुन्दर युवतीसँग विवाह गर्नु अगाडी युवतीमा भएको संस्कारमा ध्यान दिनु पर्छ । आचार्य चाणक्यको सुन्दरताको बारेमा केहि फरक नजर रहेको छ । उनको अनुसार सुन्दरता मात्र देखेर कहिल्यै विवाह जस्तो महत्वपुर्ण निर्णय गर्न हुँदैन । उनले यदि कोही पुरुषले कसैको सुन्दरतालाई देखेर विवाह गर्छ भने उ भन्दा मुर्ख कोही हुँदैन भनेका छन् । आचार्य चाणक्यल...
१९ फाल्गुन २०७७, बुधबार १३:४११९ फाल्गुन २०७७, बुधबार १३:४११९ फाल्गुन २०७७, बुधबार १३:४१ by Samabeshi KhabarNo Comments
दोभान बजारमा भएको आगलागीमा घर बनाउन सरकारले प्रतिपरिवार ५ लाख दिने
काठमाडौं, (ससं) । ताप्लेजुङको दोभान बजारका अग्निपीडितलाई दीर्घकालीन पुनस्स्थापनाको मागसहित गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । ताप्लेजुङका सांसदसमेत रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि (नेकपा)का नेता योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा बुधबार (आज)ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । ज्ञापनपत्रमा दोभानका आगलागीपीडितलाई भूकम्पपीडितसरह सहयोग उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । मिरिङदेन गाउँपालिका–३ स्थित दोभान बजारमा मंगलबार भएको आगलागीमा ४९ घर जलेर नष्ट भएका छन् भने डेरावालसहित ७९ परिवार विस्थापित भएका छन् । भट्टराईकै नेतृत्वमा दोभान बजार अग्निपीडित राहत तथा सहयोग समिति गठन गरिएको छ । ‘आगलागीका कारण आवासविहीन हुन पुगेकाहरूलाई तत्काल राहत पुर्‍याउन, पहाडी भेगका बजारहरूमा आगलागीबाट हुने जोखिम र क्षति न्यूनीकरण गर्न दमकल तथा पानी ट्यांकीको व्यवस्थापन गरिदिन तथा पीडितको हितमा व्यवस्थित सहरी विकास आयोजनाको व्यवस्...
ओली बामदेवलाई भेट्न भैंसेपाटीमा
२१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार २३:३४ by Samabeshi Khabar
प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दै
२१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १७:३३ by Samabeshi Khabar
प्रधानमन्त्री ओलीले भने : ‘उहाँले एउटा कदमबाट नेपाली जनताको मन धेरै जित्नु भएको छ’
२१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १७:२३ by Samabeshi Khabar
सरकार र ‘विप्लव’ नेकपाबीच भएको तीन बुँदे सहमति यस्तो छ
२१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १६:४६ by Samabeshi Khabar
पछिल्लो २४ घण्टामा थप १२० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
२१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १६:३९ by Samabeshi Khabar